Sida loo Laablaab YouTube Videos
Waa arrin aad u dhibsado si aad u daawato video YouTube ah nooca aan sax ahayn. Waxaan soo gaarto dad badan oo shirar kala duwan oo si xun u doonayaan in ay ogaadaan sida ay u shaandheyn YouTube videos. Dhibaatooyinka waxaa inta badan loo kala qaybiyaa laba qaybood. Mid ka mid ah waa in ay isku shaandheyn ku soo bixi YouTube videos; kale waa in uu isku shaandheyn videos in horay uploaded in YouTube. Hadda, Waayo, kuwaas oo laba xaalado kala duwan, waxaan la wadaagi doona xal.
Qaybta 1aad: Sida loo Laablaab soo bixi YouTube Videos
Qeybta 2: Sida loo Laablaab YouTube Videos Online
Haddii aad rabto in aad isku shaandheyn ku soo bixi video YouTube, waxaa jira ah editor desktop video wanaagsan u akana Wondershare Filmora . Sidaa daraadeed, waxaad hagaajin kartaa YouTube video ee orientation in ka yar 5 daqiiqo. On top of in, waxaad codsan kartaa saamaynta video kala duwan hufay aad videos oo si toos ah mar kale geliyaan gal YouTube.
Weey wanaagsan tahay? Waxaa Download hadda iyo sida loo isticmaalo this rotator YouTube inay isku shaandheyn aad YouTube videos.
Tallaabada 1. Import video YouTube ee barnaamijka
Riix ah "Import" button ama si toos ah u jiidi video YouTube bixi in album User ee this YouTube video rotator. Markaas jiidi oo hoos ka album in ay Timeline ah.
Tallaabada 2. Laablaab video YouTube ah
Double guji video ku saabsan Timeline in ay arbushin ilaa video ah sixiddiisa uu furmo suuqa, meesha aad la siiyaa ah "beddesha" qalab. Markaas kaliya riix "beddesha" button inay isku shaandheyn video in aragtida play midig. Isla mar ahaantaa, waxaad ku eegaan karo saamaynta uu furmo suuqa aragtida midig. Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, riix "Return" badhanka si loo xaqiijiyo goobaha aad u tagtaan inaad interface ugu weyn ee dib.
Tallaabada 3. Save ama geliyaan aad video in YouTube
U hubso in aad ku qanacsan tahay wax walba. Markaas riix "Abuur" badhanka si loo badbaadiyo video nasiisay. Waxaad tegi kartaa "YouTube" tab ay si toos ah u geliyaan aad video in YouTube. Haddii aad rabto in aad ka ciyaaro ee YouTube video nasiisay on Qalabka telefoonada gacanta sida iPod, iPhone, iPad, u tag "Device" dooro qalab ka mid ah liiska. Waxaad kaloo booqan kartaa "Qaabka" tab si uu u badbaadiyo video qaabab kala duwan ama gubi in DVD u ciyaaro on TV.
Video Tutorial: Sida loo Laablaab YouTube Videos
Waa u badan tahay in dadka isticmaala telefoonka mobile inay isku shaandheyn video ah on YouTube, maxaa yeelay, videos ee uploaded YouTube a mara telefoonka ay u muuqdaan inay si hab wareega qaldan. Haddii aad geliyaan video YouTube, laakiin waxa ay kor u yeellay muujinaysaa ama dhinac, waxaad isticmaali kartaa YouTube ku Video Editor. Waa wax iska fudud browser-ku-saleysan video editor ah ay bixiyaan YouTube laftiisa. Waxaa isticmaala u saamaxaaya in ay sameeyaan itusi yar videos ay uploaded gal YouTube, sida beddesha, dalagga, darsamaan, kala qaybsan oo ku darto saamaynta. Raac tilmaan fudud oo ay soo jeedin YouTube video sida saxda ah online.
Tag goobta YouTube iyo gasho in aad xisaabta. Guji "Upload" >> "Edit" u Video Editor tab.
Wareeji YouTube video
Jiid video eee waqtiga. Markaas laba jibaar u riix. Daaqadda pop up ka, waxay helaan "wareegga" doorasho oo guji si aad isku shaandheyn video in nooca saxda ah.
Sida loo jar / goo / Split YouTube (FLV) Videos
Sida loo dar Motion u gaabiya YouTube Videos
MOV Converter - Beddelaan MOV (Quicktime) si video iyo badalo video in MOV (Quick
Sida loo Beddelaan wmv in DVD ee Mac iyo Win (Windows 10 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo Laablaab YouTube (FLV) Videos